UTHANDO: UMartin Vrijland
Inyoka, uKundalini, uEva, uthando kunye nokukhanyisa
Kufakwe kuyo UTHANDO	by UMartin Vrijland	6 Januwari 2016	• 11 Comments
Ukuqonda kakuhle eli nqaku kuluncedo ukuba unolwazi olungokwenkolo. Umzekelo, kunceda ukwazi ibali lokudala kwiBhayibhile. Ibali lika-Adam noEva liza apha ngokukhanya okuhluke ngokupheleleyo kwaye kubonakala kungaphezulu nje kwenkolelo yenkolo evela [...]
Uthando, ukungqubuzana kwe-quantum kunye neyokuqala kwimvelaphi kaThixo
Kufakwe kuyo UTHANDO	by UMartin Vrijland	9 Aprili 2015	• 7 Comments
Kukho imibhalo emininzi eBhayibhileni. Kuqoqo lweencwadi apho abantu abaninzi nangaphezulu baqala ukuqaphela ukuba sinokukuthelekisa oku ngeendaba zanamhlanje; ngolu hlobo lokuba zonke iindaba zethu zichongiwe yi-arhente ezinkulu zeendaba. Ngaloo ndlela zonke iincwadi zeBhayibhile zihlelwe yibhokisi yamandla ngokunjalo. Ewe [...]
Ulonwabo, ukwesaba kunye nokuxhamla uthando
Kufakwe kuyo UTHANDO	by UMartin Vrijland	4 Aprili 2015	• 3 Comments
Umntu usoloko efuna ulonwabo, kodwa ngokusoloko ebonakala engenakulinganiswa noluvuyo. Ukuba sithandana neendlebe zethu, siyaziva sivuyayo, kodwa ukwesaba ukulahlekelwa yiyo kuphuhliswa. Ukuba sinemali eninzi kwaye sinokuthenga imoto enhle, ngoko [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.484.369